Chelsea oo heshay magaca taageerihii sameeyey astaanta daanyeerka kulankii Man Utd. - Caasimada Online
Home Warar Chelsea oo heshay magaca taageerihii sameeyey astaanta daanyeerka kulankii Man Utd.
Chelsea oo heshay magaca taageerihii sameeyey astaanta daanyeerka kulankii Man Utd.
Taageerihii kaasoo muuqday Stamford Bridge isagoo sameynaya falal cunsuri ah oo uu ula jeeday weeraryahanka Manchester United Danny Welbeck ayaa la helay magaciisa, ninkaa ayaa smeynaayey astaanta daanyeerka xilli uu hortiisa taagnaa Danny waxaana lagu magacaabaa Gavin Kirkham.
Taageerahaan ayaa sameeyey astaanta daanyeerka xilli ay kaamirooyinku qabanayeen kulankii 5-4 ku dhamaaday ee dhacay garoonka Chelsea.
Kirkham, waa 28 jir, waxaana lagu sawiray xilligaas isagoo sameynaya astaanta daanyeerka uu ula jeeday inuu ku faquuqo Welbeck wuuna ka yimid halka la yiraa Matthew Harding Stand. Wuxuuna diirada u saran yahay Booliska iyo kooxda oo baaraya.
Kirkham, oo markii uu ciyaarta daawanaayey ka yimid magaalada Letchworth Garden ee Hertfordshire, wuxuu fadhiyey booskii lagu dhaawacay Steward kulankii horyaalka ee 3-2 guul darro ah ay Blues kasoo gaartay Man Utd kaasoo ka mid ahaa shaqaalaha garoonka Chelsea.
Arag sawiradiisa hoose isagoo sameynaya astaanta daanyeerka.